बर्ड फ्लु लाग्दा कुखुरा नष्ट गर्नु उत्तम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बर्ड फ्लु लाग्दा कुखुरा नष्ट गर्नु उत्तम
२०७२ बैशाख ९, बुधबार ०२:२६ गते
‘विदेशी भ्याक्सिन खतरा’
भरतपुर । सरकारले कुखुरामा भ्याक्सिन लगाएर बर्ड फ्लुजस्तो महामारी रोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नीति बनाउन तयारी गरेपछि कुखुरा व्यवसायीहरुमा यसको प्रयोगबारे मतान्तर देखा परेको छ । आफँैले भ्याक्सिन उत्पादन नगर्ने भएपछि विदेशबाट ल्याएको भ्याक्सिन दिन हुँदैन भन्ने मतका साथ व्यवसायीहरु यसको विरोधमा छन् ।
कृषि विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक तथा पोल्ट्री विशेषज्ञ डा रेवन्तकुमार भट्टराई भ्याक्सिन ल्याउन नहुने पक्षमा देखा परेका छन् । ‘भ्याक्सिनले रोगलाई निर्मूल नपारेर व्यवस्थापनमात्रै गर्छ । त्यसैले बर्ड फ्लु लागेका बेलामा सबै कुखुरा नष्ट गर्नु नै उत्तम हो । यसले नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्छ तर भ्याक्सिनले होइन’ भट्टराईले भने ।
सन् १९५९ यता विश्वमा ३५ पटक बर्ड फ्लुको प्रकोप भएकोमा ३० वटा प्रकोपलाई कुखुरा समुल नष्ट गरेरमात्रै नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकी पाँचवटा प्रकोपका बेलामा भ्याक्सिन प्रयोग भएको छ तर त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन जति समुल नष्ट गर्दा देखिएको थियो’ डा भट्टराईले भने ।
पोल्ट्री व्यवसायी मञ्च नेपालका महासचिवसमेत रहेका डा भट्टराईका अनुसार चीन, इजिप्ट, इन्डोनेसिया भियतनामजस्ता देशहरुले नियमित भ्याक्सिन प्रयोग गरेका छन् । ‘प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन, नियमित सर्वेक्षण र अनुगमन, अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रयोगशाला चाहिन्छ भ्याक्सिन कार्यक्रम सुरू गर्न’ उनले भने ।
तर नेपालमा पूर्वाधारको अभावका साथै सरकारी अनुगमन र सर्वेक्षण पनि निकै कमजोर हुने भएकाले विदेशबाट भ्याक्सिन ल्याएर प्रयोग गर्न दिनु घातक हुने उनले बताए । कम गुणस्तरको अनुपयुक्त भ्याक्सिन प्रयोग भएमा हुन सक्ने रोगको प्रकोपले कुखुरापालन व्यवसाय नै नष्ट भएर जाने खतरा रहेको डा भट्टराईले बताए ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद प्रेमीका अनुसार बर्ड फ्लु भ्याक्सिन प्रयोग गर्न दिने वा नदिने भन्ने नीतिगत निर्णय लिन सरकारले दुई वर्षदेखि छलफल सुरू गरेको छ । ‘एउटा ठूलो समूह छ, जसले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ । कोहीले प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छन्, तर हामीले केही निर्णय गरेको अवस्था भने छैन’ महानिर्देशक पे्रमीले भने ।
दुई वर्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञसमेत गरेर पाँच पटक बैठक राखेर राय लिएको उनले जानकारी दिए । ‘अन्धाधुन्ध प्रयोग बढ्ला कि भन्ने चिन्ता हो । गुणस्तर कसरी कायम गर्ने ? व्यवस्थापन र अनुगमनलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्ने कोणबाट बढी चिन्ता गरिएको छ’ पसुसेवा विभागका महानिर्देशक प्रेमीले भने ।
कृषि विश्व विद्यालयको पशु विज्ञानतर्फका डिन डा आइपी ढकाल कुखुरा व्यवसाय बचाउन भ्याक्सिन अपरिहार्य भएको धारणा राख्छन् । ‘प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गरौं तर प्रयोग नै नगर्ने भन्ने हुँदैन’ ढकालले भने । सुरूमै व्यवसायिक फार्महरुमा प्रयोग गर्नुभन्दा ह्याचरीदेखि सुरू गरेर अनुभव लिँदै विस्तार गर्न उनले सुझाव दिए ।
प्रयोग किन गर्ने ? र प्रयोग नगर्ने हो भने के कारणले नगर्ने ? एउटा निचोडमा पुगेपछि हामीले निर्णय लिने छौँ । त्यसैको वैज्ञानिक आधारहरु खोज्दै छौँ । दिने वा नदिने भन्ने बारेमा त्यसै निर्णय गर्दैनौँ’ पशु सेवा विभागका महानिर्देशक प्रेमीले भने । खाद्य र पशु स्वास्थ्यमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहका विज्ञहरुसँग पनि धारणा लिएको उनले जानकारी दिए ।
‘यही अवस्थामा भ्याक्सिन ल्याएर प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले कुखुरा व्यवसायलाई जोगाउने सम्भावना छैन । भ्याक्सिन व्यापारीहरुलाई कमाउने अवसरमात्रै दिन्छ । त्यसैले हामी अन्य उपायमा लागौं भ्याक्सिनमा होइन’ नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले भने ।